Umaki: idumela lomthumeli | Martech Zone
Umaka: isithunzi somthumeli
Uma kunengxenye eyodwa yomsebenzi wami eqhubeka nokungenza ngishaye ikhanda lami ngibheke odongeni, ukuhanjiswa kwe-imeyili. Siyaqhubeka nokukhulisa uhlu olubandakanyekile lwababhalisile be-imeyili kepha ama-geesh, ama-ISP ahlekisa. Kwezamabhizinisi, into eyodwa eyenzekayo ukuthi ama-imeyili ayaphenduka njengoba abasebenzi beza bengena. Sizoba nababhalisile basebenzisana njalo izinyanga bese kuthi - poof - ama-imeyili aqhume. Noma okubi kakhulu, badluliselwa kokunye